‘सोसल सेप्टेम्बर’- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
सेप्टेम्बर महिनाभर सबैखाले सोसल मिडिया प्रयोगबाट टाढा रहेर सामाजिक सम्बन्ध बढाउने अभियान सुरू भएको छ । यो के हो ? यो किन आवश्यक छ ?
बेलायतको रोयल सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थले ‘स्क्रोल फ्रि सेप्टेम्बर’ अभियानको घोषणा गर्दै लेखेको छ– यसले हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ ।
श्रावण १८, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — घरमा खान बस्दा होस् वा अफिसको बैठक । हाम्रो हातको स्मार्टफोन स्क्रिन सधैं अन हुन्छ । जति बेला पनि मोबाइल चलाउने बानीले हाम्रो धेरै समय खेर गइरहेको छ । हामीलाई मोबाइलमा कैद गर्न बाध्य पार्नेमा सोसल मिडिया प्रमुख कारक हुन् । सोसल मिडियाका नोटिफिकेसन, अपडेट, अरूका फोटो र भिडियो हेरेर हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय खेर गइरहेको त छ नै, आफू नजिकका व्यक्तिसँग घुलमिल हुने हाम्रो बानीलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ ।
भर्खरै मात्र बेलायतको एक संस्थाले प्रयोगकर्तालाई सेप्टेम्बर महिनाभरि सोसल मिडिया नचलाउन आग्रह गर्दै एक नयाँ अभियानको घोषणा गरेको छ– स्क्रोल फ्रि सेप्टेम्बर । एक महिना सोसल मिडियाबाट टाढै रहन आग्रह गर्नुको कारणबारे खुलाउँदै संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ– यसले हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ । बेलायतको रोयल सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थले यो अभियान सुरु गरेको हो । यो संस्थाले सामाजिक सञ्जालबाहेक अल्कोहल र चुरोट छाड्न पनि यस्तै खालको अभियान सुरु गर्दै आएको छ । उसले जनवरीमा अल्कोहल नखाने अभियान ‘ड्राई जनवरी’ र अक्टोबर महिनाभरि चुरोट नखाने अभियान ‘स्टपक्टोबर’ सुरु गरेको थियो ।
स्क्रोल फ्रि सेप्टेम्बर अभियानका लागि आह्वान गर्दै संस्थाले ३० दिन सबैखाले सोसल मिडिया एकाउन्ट प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । यो अभियानमा सहभागिता जनाउनेले म्यासेजिङ एप र कार्यालय प्रयोजनका लागि हुने एप प्रयोग गर्न भने सक्नेछन् । मोबाइल फोन र सोसल मिडियाको लत कम गर्न केही सुझाव पनि संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ । जस्तै– कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मोबाइल प्रयोग नगर्ने, ६ बजेपछि मोबाइल प्रयोग नगर्ने, आफ्नो बेडरुममा मोबाइल प्रयोग नगर्ने, कार्यालयमा आफ्नो व्यक्तिगत एकाउन्टहरू प्रयोग नगर्ने ।
मोबाइल, इन्टरनेट र सोसल मिडियाको लत मानिसलाई कति धेरै लागिसकेको छ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने एक उदाहरण बेलायती कमेडियन रसेल केन पनि हुन् । आफ्नो अभिनय र व्यंग्यले उनले धेरै मानिसलाई हँसाएका छन् भने आफ्नो सामाजिक कामका कारण पनि उनी प्रशंसित छन् तर भर्खरैको एक अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो इन्टरनेटको लत छुटाउन परामर्श कक्षा लिने गरेको खुलासा गरे । ‘मैले यो मेसिन (मोबाइल) कसरी चलाइरहेको छु भन्ने नियन्त्रण मेरो हातमा छैन’ उनले भनेका छन् । रसेल केनको यो भनाइबाट पनि मोबाइलको लत कति भयावह हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
मोबाइल प्रयोगको लत हानिकारक भएको भन्दै सबैतिर यसको चर्चा हुन थालेपछि प्रविधि कम्पनीहरू आफैंले यसको समाधानको उपायका लागि समेत प्रयास गरेका छन् । केही अघि गुगलले आफ्नो आगामी अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड पीको घोषणा गर्दै प्रयोगकर्तालाई मोबाइल कम प्रयोग गर्ने बानी पार्न नयाँ फिचर सुरु गरिएको जनाएको थियो । ड्यासबोर्ड नाम दिइएको उक्त फिचर एन्ड्रोइड पीमा उपलब्ध हुनेछ । यसले प्रयोगकर्तालाई कति घण्टा मोबाइल चलाइयो, कुन एप चलाइयो भन्ने विस्तृत जानकारी दिनुका साथै उनीहरूलाई दैनिक यति घण्टा मोबाइल चलाउने भनेर निर्धारण गर्ने सुविधा पनि दिनेछ ।
लगत्तै आफ्नो नयाँ आईओएस ल्याउँदै गुगलले यस्तै खालको फिचर घोषणा गर्‍यो जसको नाम दिइएको छ– स्क्रिन टाइम । आईओएस डिभाइसमा पनि यसले प्रयोगकर्ताको कति घण्टा कुन एपमा बित्यो, उनीहरूले केमा बढी समय बिताए, मोबाइल चलाउनमा उनीहरूको दैनिक कति समय गयो, घण्टामा कति पटक उनीहरूले मोबाइल अन गरेजस्ता विवरण दिनेछ ।
प्रौढ प्रयोगकर्तामा मोबाइलको लत त छँदै छ, यसबाहेक बालबालिकामा मोबाइलको लत झन् डरलाग्दो स्वरूपमा देखिएको छ । बालबालिकामा मोबाइलको लत डरलाग्दो देखिएको भन्दै केही अघि एप्पलकै लगानीकर्ताले समेत कम्पनीलाई खुलापत्र लेख्दै कुनै कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ १०:३७
श्रावण ११, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — स्मार्टफोन कम्पनीहरुलाई एन्ड्रोइड नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिएर आफ्नो एपलाई पहिलो रोजाइमा राख्न लगाएको भन्दै ईयूले गत साता गुगललाई ५ अर्ब १० करोड डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो । एन्ड्रोइडको पछिल्लो भर्सन ओरियो प्रयोग गर्नेको संख्या पनि कुल प्रयोगकर्ताको करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ ।
अहिले विश्वभर प्रयोग भइरहेका मध्ये करिब ८० प्रतिशत स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग हुन्छ । गुगलले बनाएको यो अपरेटिङ सिस्टम फोन निर्माताहरूले नि:शुल्क प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अपरेटिङ सिस्टम अन्य निर्माताहरूले सामान्य परिमार्जन गरी आफ्नो डिभाइसमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमा सामसुङ, एचटीसी, हुवावेजस्ता फोन निर्माता कम्पनीहरू गुगलद्वारा निर्मित यो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेका छन् । र, यिनै कम्पनीका डिभाइसले नै मोबाइल बजारमा आधिपत्य जमाइरहेका छन् ।
यस्ता कम्पनीहरूलाई नि:शुल्क अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न दिएबापत गुगल पुरस्कृत हुनुपर्ने हो तर युरोपियन युनियन (ईयू) ले अघिल्लो साता उसलाई ५ अर्ब १० करोड डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो । आफूले अपरेटिङ सिस्टम बनाएर अन्य फोन निर्मातालाई नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिँदा पनि गुगललाई किन जरिवाना ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेबापत गुगलले फोन निर्मातासँग राख्ने एक सर्तका कारण ईयूले यो जरिवाना गरेको हो ।
गुगलले आफ्ना अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेबापत फोन निर्माताहरूसँग एक सर्त राख्छ, जसअनुसार उनीहरूले गुगलले बनाएको केही निश्चित एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डिफल्ट एपका रूपमा राख्नुपर्छ । जस्तै– युट्युब, जिमेल, म्याप । फोन निर्माताहरू प्नि गुगलको यो सर्त स्विकार्दै यिनै एपलाई आफ्नो स्मार्टफोनको पहिलो रोजाइको एपका रूपमा राख्छन् । साथै, उनीहरूले आफूले बनाएका एपहरू पनि मोबाइलमा यसैगरी राख्छन् । त्यसैले प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा केही उस्तै प्रकृतिका एप दुई वटासम्म भेट्छन् । जस्तै– सामसुङको फोनमा गुगल र सामसुङ दुवैको आ–आफ्ना भ्वाइस असिस्टेन्ट भेटिन्छन् । अपरेटिङ सिस्टम नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिएर आफ्नो एपलाई पहिलो रोजाइमा राख्न लगाएको भन्दै ईयूले गुगललाई जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।
जरिवानाको निर्णय गर्दै ईयूको प्रतिस्पर्धा आयुक्तले ९० दिनभित्र ठोस निर्णय गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । यो अवधिमा गुगलले कम्तीमा पनि ईयूअन्तर्गतका प्रयोगकर्ताका लागि एन्ड्रोइडमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र, उसले विश्वभर हुने आफ्नो दैनिक कारोबारको ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
गुगलले आफ्नो एन्ड्रोइड नीतिमा परिवर्तन गरे पनि यसको प्रभाव तत्काल प्रयोगकर्तामाझ भने नदेखिन सक्छ । यो परिवर्तित नीति अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ भर्सनमा उपलब्ध हुनेछ । तर, तथ्यांकअनुसार एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएको स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने निकै थोरै प्रयोगकर्ताहरूले मात्र यसको पछिल्लो भर्सन प्रयोग गर्ने गर्छन् । एन्ड्रोइडको पछिल्लो भर्सन ओरियो प्रयोग गर्नेको संख्या कुल प्रयोगकर्ताको करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ ।
प्रयोगकर्तालाई परिवर्तनको अनुभूति नभए पनि यो जरिवानाले गुगललाई भने पक्कै पनि अन्योलमा पार्ने छ । उसले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिएबापत आफ्ना
केही एपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न लगाउँदै आएको थियो । यसकै कारण उसका युट्युब, जिमेल, म्यापजस्ता एपले एक अर्बभन्दा बढी नियमित प्रयोगकर्ता कमाइसकेको छ । तर, अपरेटिङ सिस्टम नि:शुल्क उपयोगका लागि दिएबापत यो सुविधा नपाउने हो भने गुगलले अब नि:शुल्क देला त ?
धेरैको अनुमान छ अब गुगलले थोरै भए पनि पैसा लिएर स्मार्टफोन निर्मातालाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगका लागि अनुमति दिनेछ । तर, यो अनुमान गलत हुन पनि सक्छ किनकि गुगलको आम्दानीको हिस्सामा यो जरिवाना निकै नगन्य मात्रै हो । यो मार्चसम्मको तथ्यांकअनुसार मात्रै पनि गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटसँग १ सय ३ अर्ब डलर मौज्दात छ ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ १०:४३
लाइक संख्या हटाउने
आइफोनमा पेन्सिल !
ओल्ड टाउन स्टार
बलियो ज्यान स्वस्थ शरीर
नयाँ एन्ड्रोइडको नाम के होला ?
एसिड कारोबार नियमन गर
सम्पादकीय भाद्र २२, २०७६
नेपाली समाजमा पहिले खासै नसुनिने एसिड प्रहारका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन् । खासगरी आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा ‘अपमानित’ भएको झैं ठान्ने पुरुष...
धर्म परिवर्तनको मुद्दा
आहुति भाद्र २२, २०७६
अफ्रिकामा गोराहरू आउँदा उनीहरूसँग बाहुबल थियो, हामीसँग थियो जमिन । उनीहरूले भने, ‘लौ, प्रार्थना गरौं !’ हामीले आँखा बन्द गर्‍यौं । जब आँखा खोल्यौं, हामीसँग बाइबल थियो...
हामी सरकारमा किन गयौं ?
कमल थापा भाद्र २२, २०७६
नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि सरकारमा राप्रपाको सहभागितासम्बन्धी विषय विवादास्पद, भ्रमपूर्ण र अलोकप्रिय छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको धेरैलाई चित्त...
भूमि ऐन र मधेसी मनको त्रास
रीता साह भाद्र २२, २०७६
हालै संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१) मा केही संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा १८ मा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ जसअनुसार कम्तीमा १०...
शिक्षण, मानौं 'माइकल काँक्रा’
हरिहर तिमिल्सिना भाद्र २२, २०७६
गत वर्षको कुरा हो । राज्यले निकालेको मर्यादा क्रममा सारा मुलुक अटायो, शिक्षक अटाएन । सायद शिक्षकको मर्यादा नभएर ! मर्यादा गर्नुपर्ने कुनै उल्लेखनीय कारण नभेटिएर पनि...